Noa Akafamba naMwari | Tevedzera Kutenda Kwavo
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
NOA anombotwasanudza musana uye nyama dzake dzava kurwadza. Ita seuri kumuona akagara pazidanda akamboti zororei achitarisa areka hombe yaari kuvaka. Ari kunzwa tara iri kunhuwa uye maungira ematurusi ari kushandiswa pakuvaka areka. Akagara kudaro anoona vanakomana vake vachishanda nesimba pabasa rokuvaka areka yakakura. Akanga atova makumi emakore Noa nemudzimai wake nevanakomana vavo nemadzimai avo vachishanda vose pabasa iri. Vakanga vafamba chaizvo nebasa asi rwendo rwakanga ruchiri rurefu.
Vanhu vomunzvimbo yacho vaifunga kuti Noa nemhuri yake vaipenga. Basa rokuvaka areka zvaraifambira mberi, vanhu vacho vaitowedzerawo kuseka pavainzwa kuti kwaizouya mafashamo aizofukidza nyika yose. Vanhu vaiona sokuti zvavaiudzwa naNoa zvaisazombofa zvakaitika uye zvaiva zvokupenga. Vaishaya kuti sei murume mukuru aitambisa nguva yake neyemhuri yake achiita zvinhu zvisina kana nemusoro wose. Asi Mwari waNoa, Jehovha aisamuona saizvozvo.
Shoko raMwari rinoti: “Noa akafamba naMwari wechokwadi.” (Genesisi 6:9) Izvozvo zvairevei? Zvaisareva kuti Mwari akauya pano panyika kana kuti Noa akaenda kudenga. Zvaireva kuti Noa aiteerera Mwari wake zvikuru uye aimuda zvakadzama zvokuti iye naJehovha vaitoita seshamwari dziri kufamba pamwe chete. Papera zviuru zvemakore, Bhaibheri rakati nezvaNoa: “Nokutenda [kwake] akapa nyika mhosva.” (VaHebheru 11:7) Akaipa mhosva sei? Mazuva ano tingadzidzei pakutenda kwake?
MURUME AIVA ASINA CHAAIPOMERWA MUNYIKA YAKAIPA
Noa akakurira munyika yakanga ichibva pakuipa ichienda pakuipisisa. Nyika yakanga yakaipa panguva yakararama tateguru vake Inoki avo vaivawo munhu akarurama aifamba naMwari. Inoki akanga aprofita kuti vanhu vasingadi Mwari vaizotongwa. Asi panguva yaNoa uipi hwakanga hwanyanyisa. Mumaonero aJehovha, nyika yakanga yashatiswa nokuti yakanga yazara nechisimba. (Genesisi 5:22; 6:11; Judha 14, 15) Chii chakanga chaita kuti zvinhu zviipe zvakanyanya kudaro?
Zvinhu zvakanga zvisina kumira zvakanaka pavanakomana vaMwari vokudenga vanonzi ngirozi. Imwe ngirozi yakanga yatopandukira Jehovha uye yakabva yava Satani Dhiyabhorosi payakachera Mwari uye payakanyengera Adhamu naEvha kuti vaite chivi. Munguva yaNoa, dzimwe ngirozi dzakapandukirawo utongi hwakanaka hwaJehovha. Dzakarega basa radzakanga dzapiwa naMwari kudenga dzikauya panyika, ndokuchinja miviri yadzo kuita seyevanhu dzichibva dzatora vakadzi vakanaka kuita madzimai. Ngirozi idzodzo dzaizvikudza uye dzaingoda kuzvifadza ndidzo nhubu dzaiita kuti zvinhu zvishate panyika.—Genesisi 3:1-5; 6:1, 2; Judha 6, 7.
Uyewo kuroorana kwengirozi nevanhu kwakaita kuti paberekwe mazivana akakura, aiva nesimba. Bhaibheri rinoti vana vacho vainzi “vaNefirimu” izvo zvinoreva kuti “Vawisi,” vaya vanowisira vamwe pasi. Nhubu idzi dzinotyisa dzakatoita kuti zvinhu zviwedzere chaizvo kushata panyika. Nemhaka yeizvi Musiki akaona kuti “kuipa kwomunhu kwakanga kuri kuzhinji panyika uye zvose zvaidiwa nepfungwa dzomwoyo wake zvakanga zvakangoipa nguva dzose.” Jehovha akatsidza kuti aizoparadza vanhu vakaipa ivavo papera makore 120.—Genesisi 6:3-5.
Noa nomudzimai wake vaifanira kudzivirira vana vavo kuti vasakanganiswa nevanhu vakaipa
Imbofungidzira kuti zvakanga zvakaoma sei kurera mhuri munyika yakadaro! Asi Noa akazvikwanisa. Akaroora mudzimai akanaka. Noa paakasvitsa makore 500, mudzimai wake akamuberekera vanakomana vatatu vaiti Shemu, Hamu naJafeti. * Noa nomudzimai wake vaifanira kudzivirira vanakomana vavo kuti vasakanganiswa nenyika yakaipa yavairarama. Vana vaduku vechikomana vanowanzoshamiswa uye vanowanzoyemura ‘vanhu vane simba uye varume vane mukurumbira,’ saka vanakomana vaNoa vanogona kunge vaiyemurawo vaNefirimu. Noa nomudzimai wake vaisagona kuita kuti vana vavo vasanzwa zvose zvaiitwa nemazihofori iwayo asi vaikwanisa kuvadzidzisa chokwadi chinofadza nezvaJehovha Mwari uyo anovenga uipi hwose. Vaifanira kubatsira vanakomana vavo kuti vazive kuti Jehovha airwadziwa chaizvo nechisimba uye kupanduka kwevanhu.—Genesisi 6:6.
Mazuva ano vabereki vanonzwisisa dambudziko rakasangana naNoa nomudzimai wake. Nyika yatiri yakazarawo nechisimba uye vanhu vasingateereri. Kunyange zvinhu zvinovaraidza vana zvinogona kunge zvakazara nezvinhu izvozvo. Vabereki vakangwara vanoita zvose zvavanogona kuti vadzivirire vana vavo pazvinhu izvozvo nokuvadzidzisa nezvaMwari worugare, Jehovha, uyo achaita kuti chisimba chipere. (Pisarema 11:5; 37:10, 11) Vabereki vanogona kubudirira. Noa nomudzimai wake vakakunda hondo yacho. Vana vavo vakakura vari vana kwavo uye vakaroora vakadzi vaikoshesawo kuita zvinodiwa naMwari wechokwadi Jehovha kupfuura zvimwe zvose.
Rimwe zuva upenyu hwaNoa hwakachinja. Jehovha akaudza mushumiri wake uyu waaida kuti aiva nechinangwa chokuparadza nyika yepanguva iyoyo. Mwari akarayira Noa kuti: “Gadzira areka nomuti unobudisa zvinonama.”—Genesisi 6:14.
Areka iyi yakanga isiri ngarava sezvinofungwa nevamwe. Yaiva yakangofanana nengarava pakuti yaikwanisa kuyangarara pamusoro pemvura. Yaiva zibhokisi zihombe. Jehovha akaudza Noa nezvekureba, kufara uye kukwirira kwaizenge kwakaita areka yacho, magadzirirwo ayaizoitwa uye kuti yaifanira kunamwa netara mukati nokunze. Mwari akaudzawo Noa kuti nei aifanira kuita izvozvo achiti: “Ndiri kuunza mafashamo emvura panyika . . . Zvose zviri panyika zvichafa.” Zvisinei, Jehovha akaudza Noa kuti: “Pinda muareka, iwe nevanakomana vako nomudzimai wako nemadzimai evanakomana vako vauinavo.” Noa akaudzwawo kuti aifanira kupinda nemarudzi ose emhuka muareka. Vanhu chete vaiva muareka nemhuka ndivo vaizopona paMafashamo.—Genesisi 6:17-20.
Noa aifanira kuita basa rakakura chaizvo. Areka yacho yaifanira kunge yakareba mamita 133, yakafara mamita 22 uye yakakwirira mamita 13. Yakanga yakakura kupfuura chero ngarava yomugungwa ipi zvayo yemapuranga yati yambogadzirwa. Noa akaramba kuita basa racho here kana kuti akachema-chema here achiti rakaoma? Akachinja zvimwe papurani yacho here kuti zvimurerukire? Bhaibheri rinopindura kuti: “Noa akaita maererano nezvose zvaakanga arayirwa naMwari. Akaita izvozvo chaizvo.”—Genesisi 6:22.
Basa racho rakatora makumi emakore, angasvika 40 kana kuti 50. Miti yaida kurigwa, matanda acho ozvuviwa, ozovezwa kuita mapuranga, obva abatanidzwa. Areka yacho yaifanira kuva nenhurikidzwa nhatu, musuo wokupinda nawo uye makamuri akawanda. Zviri pachena kuti nechokumusoro kwayo kwaiva nemahwindo uye pakati pedenga rayo panofanira kunge pakanga pakakwirira kuitira kuti mvura isajenga pamusoro.—Genesisi 6:14-16.
Makore zvaaifamba uye areka yava kuoneka zvayakaita, Noa anofanira kunge aifara chaizvo kuti mhuri yake yaimutsigira. Panewo rimwe basa rinofanira kunge rakanga rakanyanyooma kupfuura rokuvaka areka. Bhaibheri rinoti Noa aiva “muparidzi wokururama.” (2 Petro 2:5) Saka Noa akatungamirira mhuri yake noushingi pakunyevera vanhu vaiita zvakaipa kuti vaizoparadzwa. Vanhu vacho vakateerera here? Jesu Kristu akazotaura nezvenguva iyoyo achiti vanhu vacho “havana kucherechedza.” Akati vaiva vakabatikana chaizvo nokuita zvinhu zvezuva nezuva zvakadai sokudya, kunwa uye kuroora nokuroorwa zvokuti havana kuteerera Noa. (Mateu 24:37-39) Zviri pachena kuti vakawanda vaiseka Noa nemhuri yake uye zvinoita sokuti vamwe vaimutyisidzira uye vaimupikisa zvakasimba.
Pasinei nouchapupu hwakajeka hwokuti Mwari aikomborera Noa, vanhu vaimuseka uye vaisateerera zvaaitaura
Asi Noa nemhuri yake havana kumbokanda mapfumo pasi. Vakaramba vachivaka areka kunyange zvazvo vanhu vaifunga kuti vaitambisa nguva, vainge vakarasika uye vachiita zvoupenzi. Mazuva ano mhuri dzechiKristu dzinogona kudzidza zvakawanda pakutenda kwaNoa nemhuri yake. Tiri kuraramawo panguva inonzi neBhaibheri “mazuva okupedzisira” enyika ino. (2 Timoti 3:1) Jesu akati nguva yatiri kurarama yaizenge yakaita seyaNoa paaivaka areka. VaKristu vanofanira kufunga nezvaNoa kana vanhu vasingafariri mashoko oUmambo hwaMwari, vachivaseka kana kuti vachivatambudza. Handivo vatanga kusangana nematambudziko akadaro.
Areka yakazopera pashure pemakumi emakore. Noa paakanga ava kuda kusvitsa makore 600, akafirwa nehama dzake. Akafirwa nababa vake vainzi Rameki. * Papera makore mashanu, sekuru vaNoa vainzi Metusera vakafa vava nemakore 969, uye ndivo vakararama kupfuura vanhu vose vanotaurwa muBhaibheri. (Genesisi 5:27) Metusera naRameki vakanga vararama panguva imwe chete naAdhamu uyo aiva munhu wokutanga kusikwa.
Gore iroro, Jehovha Mwari akaudza Noa kuti: “Pinda muareka, iwe neimba yako yose.” Mwari akaudzawo Noa kuti aifanira kupinza mhuka dzakasiyana-siyana muareka. Aifanira kutora nomwe nomwe pane dzakachena idzo dzaikwanisa kushandiswa pakupa zvibayiro uyewo mbiri mbiri pane dzimwe dzose.—Genesisi 7:1-3.
Zvinofanira kunge zvaishamisa chaizvo. Mhuka dzakasiya-siyana dzaiva nemaitiro adzo akasiyana nedzimwe, dzakadirana dzichipinda muareka dzichibva kwakasiyana-siyana, dzimwe dzichifamba, dzimwe dzichibhururuka, dzimwe dzichikambaira uye dzimwe dzichinanaira. Hatifaniri hedu kufungidzira Noa achinetseka achiedza kutinha, kumhanyisa, kana kuti zvimwe kunyengetedza mhuka idzodzo kuti dzipinde muareka. Nhoroondo yacho inoti: ‘Dzakapinda kuna Noa mukati meareka.’—Genesisi 7:9.
Vamwe vangati: ‘Zvinhu zvakadaro zvingaitika sei? Uye mhuka dzose idzodzo dzaigona sei kugara pamwe chete muareka?’ Funga izvi: Kana Musiki wezvinhu zvose ada zvake, angatadza here kudzikamisa mhuka dzaakasika kunyange kutodziita kuti dzisatyisa? Yeuka kuti Jehovha ndiye Mwari akapatsanura Gungwa Dzvuku uye akaita kuti zuva rimire. Aizotadza here kuita zvose zvinotsanangurwa munyaya yaNoa? Chokwadi haaimbozvitadza!
Mwari aigonawo kunge akasarudza kuponesa mhuka neimwe nzira. Asi nekuchenjera akasarudza nzira inoita kuti tiyeuke basa rinokosha rakapiwa vanhu pakutanga rokutarisira zvipenyu zvose zviri panyika. (Genesisi 1:28) Vabereki vakawanda mazuva ano vanoshandisa nyaya yaNoa pakudzidzisa vana vavo kuti Jehovha anokoshesa vanhu nemhuka zvaakasika.
Jehovha akaudza Noa kuti mafashamo aizouya pashure pevhiki imwe. Panguva iyi mhuri yaNoa inofanira kunge yakanga yava nezvakawanda zvokuita. Chimbofungidzira basa rokuronga mhuka dzose nezvokudya zvadzo uye rokutakura zvinhu zvemhuri yavo kuti zvipinde muareka. Mudzimai waNoa uye madzimai aShemu, Hamu, naJafeti vanofanira kunge vakanga vakabatikana nokuita kuti vave nepokugara pakanaka muareka macho.
Ko vamwe vanhu vakanga vakavapoteredza vakaiteiwo? Vakaramba ‘vasingacherechedzi’ kunyange zvazvo zvaiva pachena kuti Jehovha aikomborera Noa pazvose zvaaiita. Vakatoona mhuka dzichidirana kupinda muareka. Asi hatifaniri kushamiswa nekusakendenga kwavo. Mazuva ano vanhu havacherechedzi uchapupu hwakajeka hwokuti tiri kurarama mumazuva okupedzisira enyika ino. Uye sezvakafanotaurwa nemuapostora Petro, vaseki vave vachiuya nekuseka kwavo, vachinyomba vaya vanoteerera nyevero yaMwari. (2 Petro 3:3-6) Ndizvo zvakaitawo vanhu vakaseka Noa nemhuri yake.
Kuseka kwacho kwakazoguma rini? Nhoroondo yacho inotaura kuti Noa paakanga apinda muareka pamwe chete nemhuri yake nemhuka, “Jehovha akavhara suo.” Kana paiva nevaseki vakaona izvi zvichiitika, vanofanira kunge vakabva vati zii. Kana vasina kunyaradzwa naizvozvo, mvura ndiyo yakazoita kuti vanyarare, nokuti yakabva yatanga kunaya! Yakaramba ichingotsvotsvoma, kusvikira yazadza nyika yose sezvakanga zvataurwa naJehovha.—Genesisi 7:16-21.
Jehovha akafara here nekufa kwevanhu vakaipa ivavo? Kwete! (Ezekieri 33:11) Akanga avapa mukana wakakura wokuchinja mararamiro avo kuti vaite zvakanaka. Zvaikwanisika here kuti vadaro? Zvakaitwa naNoa zvinoratidza kuti zvaikwanisika. Noa akaratidza kuti zvaiita kuti munhu apone nokufamba kwaakaita naJehovha uye nokuteerera zvose zvakataurwa naMwari. Kutenda kwake kwakapa nyika mhosva uye kwakanyatsobudisa pachena uipi hwevanhu vakararama panguva imwe chete naye. Kwakamuchengetedza iye nemhuri yake. Kana ukatevedzera kutenda kwaNoa, uchazviponesawo pamwe chete nevaya vaunoda. Kungofanana naNoa, unogona kufamba naJehovha Mwari seshamwari yako. Uye ushamwari hwacho hunogona kugara nokusingaperi!
^ ndima 10 Panguva iyoyo vanhu vairarama upenyu hwakareba chaizvo kupfuura hwedu. Zvinoita sokuti izvi zvaikonzerwa nokuti vakararama panguva iri pedyo neyakararama Adhamu naEvha avo vaiva vasina chivi uye vakasimba asi ndokuzotadza uye ndokurasikirwa nesimba iroro.
^ ndima 20 Rameki akapa mwanakomana wake zita rokuti Noa izvo zvingareva kuti kuti “Zororo kana kuti Kunyaradza” uye akanga aprofita kuti Noa aizozadzisa zvinorehwa nezita rake paaizotungamirira vanhu kuti vazorodzwe pakurwadziwa nokuita basa panyika yakatukwa. (Genesisi 5:28, 29) Rameki akafa uprofita uhwu husati hwazadzika.